Ọrụ ugboala na Dubai ụlọ ọrụ kachasị mma ịchọta ọrụ
Ntụziaka maka Ọrụ Arụ Ọrụ na Dubai
Ọrụ Ụlọ Ọrụ International nke Jerry Varghese
Na-ejegharị na nyochaa na Dubai
Ọrụ akụrụngwa na Dubai
Ọrụ na Dubai ohere ụgbọala
Ọrụ ugboala na Dubai, nke ahụ bụ ikwu mgbe ị na-achọ maka ohere ohuru. Companylọ ọrụ anyị ga-achọ ịme ka ị mata ụlọ ọrụ kasị mma ịrụ ọrụ na UAE. Maka nke a, lee anya n'isiokwu anyị ma chọpụta otú anyị nwere ike isi nyere gị aka. Maka ndị na-eme egwuregwu na-enwe ahụmahụ na ụlọ ọrụ akụrụngwa ụgbọala.
Ya mere oburu na i nwere 3-25 afọ nke ihe omumu nke oma. Ị nwere ohere ị ga-etinye dị ka onye na-asọpụrụ ụwa n'èzí obodo gị. Na-achọ ịchọ ọrụ ọhụrụ si Caribbean, US, Canada, Saudi Arabia ọbụna Asia na Malaysia na ọbụna ọtụtụ mba n'etiti. Na Disemba 2016, Citylọ ọrụ Dubai City na-amalite ọrụ na United Arab Emirates (UAE). Yabụ, ọ bara uru n'ezie itinye akwụkwọ maka Automotive Ọrụ na Dubai.
Mgbakwunye a na Fortune 500 ụlọ ọrụ na Dubai. Ọ na-eme ọnụ isi abuo nke igba akwukwo. Thelọ ọrụ ụgbọala na-agbanwe n'ezie n'ọma ahịa. N’ezie, emeghela maka ndị isi ọrụ niile. Na ị nabata ndị mmeri mba ụwa na UK, US, Ndị na-eme egwuregwu n'Eshia na Middle East na ahụmahụ ahịa.
Na-elebara ụgwọ ọrụ akwụ ụgwọ anya. Ụdị ego ego na njedebe ebe ndi mmadu na-aga ebe di egwu. UAE karịsịa Dubai na Abu Dhabi abụghị naanị ọmarịcha ebe ọrụ. Mana ọmarịcha ebe dị egwu ma birie maka ezinụlọ na ụmụaka.
Ọrụ Egwuregwu Akụrụngwa na Egwuregwu Egwuregwu
Dịka akụkụ nke usoro nbuli elu na Middle East. Anyị Ụlọ ọrụ Dubai City ya na ụfọdụ ndị UAE kacha na-emekọrịta ihe. Na ndị a na-akwanyere ùgwù maka ndị na - ahụ maka nchekwa HR na ndị na - ewe ndị ọrụ ego ụgwọ. Ihe mbụ ị ga-echeta bụ na ọ bụghị naanị na anyị na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe ụlọ ọrụ na Dubai. Mana anyị na - achọ ugbu a maka ndị aga - achọ akwụkwọ ọhụụ nke nwere ike ịnweta ọrụ n'ụlọ ọrụ akpaaka.
Anyị na-achọgharị ugbu a maka moto ndị ọkachamara na-azụ ahịa na UAE. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe ọrụ dịka njikwa ọrụ nchịkwa. Na ahụmịtanụ na nkà na ụzụ ahụmahụ. Enwere ike itinye gị na UAE, Qatar ma ọ bụ Saudi Arabia. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ ụgwọ ọrụ elu, anyị nwere ike inyere gị aka kpọmkwem na Dubai na Abu Dhabi. Europe, US, na Canada Ndị a na-eji aka ha na-arụ ọrụ na ndị GCC. Agbanyeghị mpaghara a, anyị na-anwa inyere ndị na-aga ime ahụmihe aka. Na na-ebunye ndị nchịkwa nke HR maka ndị ọrụ nke Ugbo agha nile.
Ụbọchị ndị a bụ ụlọ ahịa asọmpi dị egwu maka nwa akwukwo ọ bụla. Iji malite na anyị na-akwụ ụgwọ maka mmepụta ndị ọrụ na Dubai. Searching na-achọ ndị na-eme ntụrụ aka gosipụtara. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe banyere ego na mkpuchi anyị, anyị nwere ike ịbanye gị na bọọdụ. N'ezie, anyị bụ na-achọ ndị na-aga ime na ahụmịhe ọrụ ndị ahịa. Yana ndị ọrụ ntuziaka maka ọrụ injinia.
Ọ bụghị ịkọwapụta ndị na-akpọ ọrụ na ndị na-ere ahịa dị iche iche n'ime mba GCC. Ugbua ịchụ ndị ọrụ India na Pakistani. N'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka gị na ụlọ ọrụ UAE na-emekọrịta ihe. I kwesịrị ile anya na ụlọ ọrụ ndị a nwere ike ịnye gị. Dịka ọmụmaatụ, Porshe na Dubai arụrịrịrịrị ndị ọrụ na-abụghị ndị Emirates ọrụ n 'ọnọdụ isi nchịkwa ha. N'eziokwu, ọ dịghị ihe ngọpụ maka gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ na-akpaghị aka.
GCC Mba na onye isi ụgbọ ala
Ụgbọala ụgbọ ala na-eto ngwa ngwa na UAE. N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike inweta uru na ya ma nweta ahụmịhe dị mkpa. Ezigbo ka etinye ya n'udo n'ebe ezigbo ụlọ ọrụ. Ikwesiri inwe ikike di omimi na ihe omuma banyere ugbo ala. N'okwu ahụ, ndị na-ere ahịa GCC na ndị were gị n'ọrụ ga-arụ ọrụ n'ọdịnihu na-eweta naanị ndị kachasị mma ịga azụmaahịa ha.
N'ọnọdụ ndị ahụ, ịkwesịrị ịmalite ịchọ onye gị na ya ga-emekọrịta ihe. Na ụlọ ọrụ na - eduzi ụgbọ ala na mba CCC. 2018 ruo 2020 ghazie ibu afọ nke na-eweta ụlọ ọrụ na-eduga na tebụl. Yabụ mgbe ị na-emeso otu onye na-eme njem na Dubai City. Ị kwesịrị ịchọta ozi ha ma magburu onwe ya na nke ọma. Karịsịa maka ọrụ ụgbọ oloko.
Ndị ọrụ nchịkwa ụwa na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè. N'ihi ya, wetara talent ọhụrụ site na GCC maka azụmahịa moto na mpaghara Gulf. Should kwesịrị ịnwere onwe gị ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu dị elu na UAE. Bulite malitegharịa ozugbo na Ndi otu ulo oru Dubai maka ohere ohuru. I nwere ike kpọọ ha ma jụọ ha otú e si agakwuru ndị ọrụ ha. N'ihi nyocha ọrụ a nke ewe n'ọrụ n'eziokwu enwere ike inyere gị aka inweta ọrụ ọhụụ n'etiti azụmahịa ụgbọ ala.
GCC na-acho otu esi etinye maka ụlọ ọrụ kasị mma?
Ohere ndị dị na GCC enweghị atụ na mba ndị ọzọ. Ị nwere ike ịnweta ezigbo ụgwọ ego kwa ọnwa. Ịkwa ahịa na-arịwanye elu na-amụbawanye ohere gị, nke ịnweta ọnọdụ nchịkwa. Na a ụlọ ọrụ na-akwọ ụgbọala dị ka Porsche ma ọ bụ Ferrari. N'aka nke ọzọ, ụgbọala ọhụrụ dị maka nkwalite.
Oge ọ bụla ị ga-emekọ ihe na njikwa HR. N’otu isi ihe gbaa mbọ mee ka onye na-ahụ maka ọrụ were ya ka i kari ike. N'iburu nke a n'uche ịnweta kọntaktị site na usoro ahụ, ọ bụ 50% nke ịga nke ọma. Gbalịa nyochaa mmelite oge niile site na ndị njikwa HR. Ma n'ezie chọọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụụ pụrụ iche na UAE ndi oru ugbo ala. Na-ekwu mgbe niile na ị ka nwere ya gaa na UAE ma ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha ụwa.
Nọgide na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ọbụla na-enye ma tinye usoro nyochaa ọ bụla ọbụna site na ekwentị. Jide n'aka na ị ga-eji aka gị rụọ ọrụ ọ bụla Kpọọ ka ị si n'aka onye na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ onye ọrụ. Gbalịa ibute oge ma kpokọta ụfọdụ ozi site na ụlọ ọrụ weebụ.
Ihe akaebe kacha agba akaebe maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-abawanye bụ ọnụ ọgụgụ nke ọrụ. Kaosinadị, ma ọ bụrụ na ị nwere ogologo ọrụ akụkọ ihe mere eme. Na agụụ siri ike ịghọ onye isi nchịkwa na onye isi njikwa na ụlọ ọrụ. Shouldkwesịrị ịkwaga n'ihu ma tinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ kachasị mma. Dị ka Audi, Mercedes, Maserati ma kwaga ọrụ gị n'ihu ruo n'ọkwa CEO.
Bestzọ kachasị mma iji tinye n'ọrụ bụ ntuziaka ndị a n'okpuru. Banye na ụlọ ọrụ anyị ọ bụla ma zigara ha CV gị emelitere. Chere ka anwansi mee. Naanị ihe ga-akwụsị gị ịkwaga ọrụ gị na ọkwa kachasị elu bụ gị!.
Tinye maka Ọrụ Ọhụrụ Gị & Ụlọ Ọrụ Ntugharị na Dubai
Ndepụta nke ụlọ ọrụ kachasị mma na ndị na-achọpụta ọrụ ịchọta ọrụ
Tinye maka Ọrụ Automobile na Dubai
Porsche Career na Dubai
Tee a: https://www.porsche.com/middle-east/_dubai_/aboutporsche/jobs/
Dubai Porsche bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kacha mma. Ị nwere ike ịmalite onye ahịa ọkachamara ahịa, onye na-ahụ maka ekwentị ma ọ bụ ọnọdụ nnabata. Ma obu inwe ike ibido onodu dika Ahịa ahịa. Ọrụ dị na Porshe gụnyere ịzụ ahịa mgbe niile. Onye ọ bụla na-arọ nrọ maka ụgbọ ala egwuregwu ahụ. Mụ na Porsche, ị nwere ike ịmepụta ọrụ dị ịtụnanya.
Ulo oru aka na emeputa ohere na Dubai. Na imepụta na-eduga n'ime obodo ahịa na Dubai na Abu Dhabi. Porsche nwere otu onye nlekọta ọrụ ọgụgụ isi. Ha nile dị njikere inyere gị aka na ọrụ gị. Ụlọ ọrụ Porsche bụ ihe karịrị naanị otu ndị na-emepụta ụgbọala n'ọdụ ụgbọ ala United Arab Emirates.
Companylọ ọrụ ahụ na-edobe ụkpụrụ ọhụụ na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Companylọ ọrụ a gụnyere otu n'ime ndị njikwa ahịa kachasị mma na ndị ọrụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwu ụgbọ ala ndị pụrụ iche ụlọ ọrụ a dị mma maka gị. Companylọ ọrụ a na-enye ndị ọrụ ọrụ ha ihe pụrụ iche. N'ihi nke a, were ndị ọhụrụ họtara ndị ọrụ ma mee ka ha nọrọ n'ọchịchị ha.
Porsche bụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na Dubai. N'elu nke a, ha nwere echiche mmepe siri ike. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-eme nyocha maka ụkpụrụ na nkà ihe ọmụma. Youkwesiri inweta ụlọ ọrụ ọhụrụ. Ọrụ eji eme injin na UAE bụ echiche doro anya maka ndị ọrụ ọhụrụ.
Gịnị kpatara Porsche na Dubai City?
Companylọ ọrụ Dubai Porshe na-enye onye ọrụ ọrụ ịnọgide na-abụ ezigbo ọrụ mmepe. Principleskpụrụ dị iche iche nke nzukọ bụ igbo mkpa dị elu. Dịka ụlọ ọrụ ama ama ama ama dị na-anya isi onwe ha. N'agbanyeghị ọnọdụ ị nọ. Na na ihe ndị ọzọ na-elekọta na Dubai.
N’ezie, Porsche wepụtara onwe ya ịbụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa. Corlọ ọrụ a na-akọwapụta HR na-akwụsị n’ihu na 2018. Ha hibere ọrụ ọhụrụ na Expo 2020. N’ezie, ụlọ ọrụ setịpụrụ ụkpụrụ ọhụrụ na Dubai.
Porsche kachasị ọhụrụ ụgbọala na-aghọ ngwa ngwa mgbe ọ bụla ihe pụrụ iche. Porsche na-atụkwa anya na nsonaazụ pụrụ iche sitere na ndị otu na-ere ahịa. Ha na-esetịpụ ụkpụrụ azụmaahịa dị elu ma a bịa na uru nke ụlọ ọrụ. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ahụ na-anwa rụpụta karịa ụkpụrụ dị elu. Inweta ọrụ na Porsche taa na ọdịnihu bụ nhọrọ kacha mma.
N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-adabere na ndị ọrụ na ndị ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ a. I tosiri mgbe niile dị njikere ịga maịl ọzọ iru ebumnuche ahia.
Tinye maka Ọrụ Ntugharị na Dubai - Porshe
Ọrụ Ferrari Corporation Dubai
Tee a: http://corporate.ferrari.com/en/career
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na Ferrari bụ ike kachasị ike na azụmaahịa ha. N'ọnọdụ ndị ahụ, Ferrari na-achọ ndị chọrọ jirichaa ahịa na ohere ịba uru. Na ijikwa ụlọ ọrụ Italiantali a n'aka nri.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ nchịkwa ị nwere ike iru oke. Ferarri bụ nnukwu ezinụlọ mgbe ị na-arụkọ ọrụ na ha ị na - eche dị ka otu. Ghara ikwu atụmanya maka ohere azụmahịa ọhụrụ. Shouldkwesịrị ịbụ onye nwere nkwukọrịta siri ike. N'elu nke ahụ, ị ​​ga-eso na-ekerịta ahụmịhe ụgbọ ala gị. Na ụbọchị niile ị na - eme ka ihe gị ka mma ikike na iru eru maka nsonaazụ kacha mma.
Companylọ ọrụ ahụ nwere mmetụta dị ike maka nhazi ọrụ. N'oge a ha nọ na ịma aka maka ịma aka ncheta afọ nke 70. Yabụ nyere isi ihe ndị a ka gị na ha na-arụ ọrụ mee ka ị chọọ oganihu n’iru n’iru oru gi. Iji ichikota na ezigbo uso ihe omumu i nwere ike kwa ubochi. Gbaa ọrụ nke ọma n'ọrụ gị maka mgbasawanye nke Ferrari Ụlọ ọrụ dị na Dubai nzukọ.
Ferrari bụ ebe dị mma ịrụ ọrụ?
N'ihe kachasị, Ferrari bụ ezigbo ụlọ ọrụ ịrụ ọrụ maka Mba Niile. Nlekọta maara uru onye ọrụ ọ bụla bara. Nyere isi okwu ndị a, ụzọ kacha mma ga-enyere gị aka ịkwalite ọnọdụ nchịkwa. Companylọ ọrụ na-ebuli arụ ọrụ na agụmakwụkwọ na ahịa. Ya mere mgbe ị na-arụ ọrụ maka ha. Nanị ihe ha nwetara bụ naanị mgbe ndị ọrụ ha chere na ha nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, n'oge kwesịrị ekwesị. Na-akwụ ụgwọ ugwo na oge na ebe kwesịrị ekwesị iji kwalite n'ọdịnihu.
Companylọ ọrụ Italiantali a kwenyekwara na nke ahụ ogo nke ugbo ala bu isi ihe na azumahia. Ogo na otutu nke ugbo ala ya apughi iche. Ya mere, ezigbo njikwa n'ime ụlọ ọrụ enyere ndị mmadụ aka na-arụ ọrụ ha na Ferrari Corporation.
Ọ bụ ya mere ọnọdụ ọnọdụ ọrụ ji dị oke mma. Ọnọdụ gburugburu ụlọ ọrụ ahụ bụ ọdịmma maka ndị ọrụ niile. Ihe kachasị mkpa bụ mgbe niile na-ege ntị. Ya mere anyị na-adụ gị ọdụ malite ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ma ọ bụrụ na ị si South Africa.
Ọrụ na Maserati
Tee a: https://careers.fcagroup.com/our-brands/maserati-home/
Companylọ ọrụ ika ọzọ ị kwesịrị ịgbalị inweta ọrụ bụ Maserati. Companylọ ọrụ a dị mfe nwere akụkọ strongtali siri ike. Maka akụkụ kachasị, bụ akara ngosi zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. N’okwu, ịgba na-ekwu ihe niile gbasara ụlọ ọrụ a. Ọhụrụ ịbịaru nso na ndụ kacha baa ọgaranya. Ihe mbụ ị ga - echeta ị ga - enwerịrị afọ siri ike nke ahụmịhe ahịa. Workrụ Maserati na ụlọ ọrụ akpaaka. Mgbe ịchọrọ akwụkwọ maka ọrụ na ụlọ ọrụ a. Ndị na - ahụ maka HR na ọkacha mma ndị na-aga aga enwe ahụmahụ ke akwa ika.
Izu ahia di iche na nka. Na ihe nketa dị ebube maka ihe kacha mma ụlọ ọrụ na-emepụta ihe eji amapụta ahịa. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ nsọpụrụ na ọnọdụ ngbanwe na ụlọ ọrụ a. Ga-eme enyere gi aka inweta oru. Yabụ mgbe ịchọrọ itinye akwụkwọ maka Maserati. You ga-erere onwe gị site gosipụta nke ahụ ị nwere ike belata ahịa na uru uru.
Yabụ mgbe gị na Maserati na-arụ ọrụ. I tosiri jikwaa ikike ikike ohuru ma mekwaa ya na ahia-nsogbu di elu, Companylọ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara olu dị elu n'ihi ya, nke a, ụgbọ ala ụlọ ọrụ Europe kwesịrị oge gị. Mee ka ha nwee ike ịchọta ebe ị ga-ahụ maka ọrụ ha banyere ọnọdụ ọrụ na ha.
Maserati emeela ka ị banye ahịa azụmahịa
Ị nwere ike igosi na ị ga-egosipụta ugbo ala ?. Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, Maserati bụ otu ezigbo ụlọ ọrụ maka gị. Ụlọ ọrụ malitere arụ ọrụ ogologo oge gara aga na nke ahụ bụ 1st December 1914. Kemgbe ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-aghọ ngwa ngwa ụgbọ ala Italy. Ihe mbụ ị ga-echeta bụ akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ. Dị ka ihe atụ nke ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na onye nchoputa ya bụ Alfieri Maserati na ụmụnne ya.
Ka oge na-aga, agụụ ha nwere maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala na nkà na azụmaahịa nyere aka wulite ụlọ ọrụ ahụ ụkpụrụ dị mkpa. Onye isi nchịkwa nke ụlọ ọrụ na-ekwu mgbe niile. Ntughari ihe ohuru na nke kachasi nma ya na igba ohuru wulite ulo a. Ebe ọ bụ na 1914 mmụọ ịgba ọsọ na-ewu ụlọ ọrụ dị ịtụnanya. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ akụkụ nke ụlọ ọrụ akụkọ ifo. I tosiri kwadebe CV na Interview na ọkwa kachasị elu.
Bugatti na Dubai
Tee a: https://www.bugatti.com/contact/
Carsgbọ, Super, ịtụnanya, ụgbọala dị ọnụ ala. Bugatti ika na-arụ ọrụ na UAE. Bugatti bu ihe oma. Anyị ekwesiri ịme ka onye ọ bụla mata ụdị nka a dị ịtụnanya? Ọbụghị, ọnụahịa nke ụgbọ ala ndị ahụ ruru 1Million USD. Na naanị ndị kasị baa ọgaranya n'ụwa niile na-enwe ike ịzụta Bugatti n'onwe ha.
Ọrụ na Mercedes-Benz Dubai
Tee a: https://mercedesbenzme.com/me/en/footer/about-us/careers/
Jiri nlezianya dekọọ ndekọ nke ọganihu ahịa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ga-enyere gị aka inweta ọrụ na Mercedes Benz. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na Dubai. Mercedes ugbu a nwere ohere izu ahia maka gị. Ụkpụrụ ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ọrụ gị dị ka ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla. N'ihi nke a nyochaa ohere ọrụ.
Na mkpokọta, onye na-ekesa ahịa na netwọ ahịa ndị na-ere ahịa nwere ike ịbụ nhọrọ amamihe dị na ya. Na weebụsaịtị Mercedes, ị nwere ike ịchọgharị site na ọrụ ha ugbu a. N’okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ịnwere ike ziga ha ngwa ngwa. Dika achoputara na weebụsaịtị ị nwere ike zigara ndị ọrụ HR Mercedes Benz ọrụ gị nkọwapụta gị.
N'egedege ihu, netwọọrụ ha. Nanị gụnyere ahịa iri na atọ ụgbọ ala. Ebee N'ezie ị nwere ike inweta ọrụ. Mercedes Benz bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-eto. Karịrị ndị na-ere ụgbọ ala Middle East na-ere ahịa injinia. A na-ahọrọ nlezianya ahọrọ ndị ọrụ Mercedes ọhụụ. Ịmalite site ebe dị egwu ha na oke ahia na ndi nkwekọrịta.
Obodo Etiti Middle East na-arụ ọrụ mpaghara. A maara nke ọma n'ihi na ndị inyom mba ụwa si mba ọzọ pụta. Naanị n'ihi ọnọdụ ọrụ dị egwu na-eweta ọrụ. N'okwu ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-adọta ndị ndọrọndọrọ obodo na ahịa ụgbọ ala Dubai. Ya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị si mba ọzọ na-enweta ọrịre ahịa na Mercedes. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ịnwere ike ịmalite ịrụ ọrụ maka otu n'ime ndị mmekọ Mercedes Benz họpụtara na mpaghara a. Ma ọ bụ Inwere ike itinye akwụkwọ maka ọkwá dị na Isi Office.
N'otu oge ahụ, Mercedes-Benz ga-enye gị. Ịtụnanya na ihe ịma aka ohere ọrụ na United Arab Emirates. Site na mmepe ọrụ ogologo oge na-akpali akpali. Dika eziokwu, ndi dinta obula ohuru na-enyocha ọdịbendị na-adọrọ mmasị nke Middle East. Mgbe ha na-esonyere ụlọ ọrụ a ma ama.
The ọrụ na Aston Martin Dubai
Tee a: https://www.astonmartinlagonda.com/careers
N'otu aka ahụ, anyị na-ewetara Aston Martin. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ n'akụkụ ndị ọrụ kachasị mma. Aston Martin management team bụ otu n'ime ụmụ amaala ụwa kasị mara. Ugboro ala ohere na nkwanye ùgwù okomoko akụrụngwa ika dị ka Aston Martin. Ga-enyere gị aka ịghọ CEO na nso nso.
Isi ihe ọzọ ma ọ bụrụ na i nwere nkà. Ị nwere ike isonyere ndị otu Aston Martin. Ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ụdị ọhụrụ. Ma jikọta ha na nkà na ụzụ na-egbutu. Ya mere enwere nhọrọ buru oke ibu maka ndi ichu nta na Dubai. Otú ọ dị, f ị nwere ahụmịhe engineering. Ị nwere ike ịchọ nkà dị mma na ịrụ ọrụ ndị ọrụ nkà na-ahụ n'anya.
Ghara ikwu ihe gbasara ọrụ onye isi na Aston Martin. Can nwere ike ibu onye njikwa ya na akuku alaka ha. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ịrụ ọrụ n'ụgbọala ndị a kwa ụbọchị bụ ezigbo ihe ụtọ.
Karịsị ọrụ pụrụ iche gburugburu ebe obibi na United Arab Emirates. Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Aston Marin Dubai Dubai gha agbago gi nke oma. Na webụsaịtị, ị nwere ike chọta ihe ndi ozo maka ndi oru choro Pakistani.
Ọrụ na Audi Dubai
Tee a: https://www.audi.com/en/career.html
Audi na-enwekwa ọtụtụ ohere na Middle East. N'ụzọ megidere nke ahụ, Audi na Dubai guzosiri ike dịka onye enyemaka zuru ezu nke AUDI AG na 2005. Ebe obibi na Audi dị ezigbo mma. Na n'akụkụ ọjọọ nke Dubai. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa. Ya mere mgbe ị malite na-arụ ọrụ na otu nzukọ. Ị ga-enwe ụlọ ọrụ azụmahịa mpaghara na-ele ọganihu gị. Ma iji Audi kwuo ihe dị mma. Ị ga-adabere n'etiti ụlọ ahịa ụgbọ ala Dubai. A pụkwara ịkwalite gị site na ịzụlite nkà gị. Ọzọkwa, ị nwere ike ibu ọrụ. Maka ụlọ ahịa Audi na-emepụta ihe na Middle East.
Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ma na-edozi ọrụ niile na-ere ahịa. Ịzụ ahịa ahịa ọhụrụ arụ ọrụ na ndị na-azụ ahịa na United Arab Emirates. Isi ihe ọzọ dị mkpa bụ na ị nwere ike ịrụ ọrụ maka ndị na-ere ahịa onwe ha na mpaghara ma ọ bụ na Saudi Arabia. Ya mere, ihe dị mkpa na ọnọdụ ọrụ gị ga-adị nnọọ mma.
Ebumnuche iji nyere gị aka. Na mkpokọta ndị otu Audi nọ n'ime ụlọ ọrụ dịka ego. Companylọ ọrụ ahụ na-eje ozi yana nkewa VW. Yabụ, maka otu ihe, ọ ga-aba ụba ngwa ngwa idozi nsogbu anyị.
N'ikpeazụ, Audi na-achọ ndị ọrụ ọhụrụ ugbu a. Dị ka e kwuru ma ọ bụrụ na ị na-achọ izute ndị ọrụ ibe ọhụrụ. Ọzọkwa, ị ga-achọ ịrụ ọrụ na ihe ịma aka n'ime obere ụlọ Audi. Ị kwesịrị tụlee ngwa oru gị maka ọnọdụ ndị a na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Kpọtụrụ ebe a: https://dubai.bentleymotors.com/meia/en/contact
Bentley Dubai, dị ka onye ọrụ gọọmentị Bentley Motors na Middle East. Yabụ, Bentley na Dubai nwere ike ezigbo nhọrọ maka oghere ọrụ ndị dị n'etiti ọwụwa anyanwụ.
Companylọ ọrụ a nwere ndị isi nwere ahụmịhe dị mma. Ha niile na-arụ ọrụ iji kpokọta ahụmịhe kachasị mma maka ndị ahịa ha. Yabụ, lee anya na weebụsaịtị ha wee nwalee iji mee ka ndị isi njikwa ha nye gị ezigbo ọnọdụ.
Companylọ ọrụ a bụkwa ezigbo aha na Dubai. Na weebụsaịtị ha, ị ga - enwe ezigbo kọntaktị ma ị ga - ahụkwa ihe ha na - eme n'eziokwu n'ihe gbasara azụmahịa. Na-arụ ọrụ na nke a Ụlọ ọrụ ụgbọala na Dubai ihu dị iche iche na mpaghara mpaghara Ọwara ọ ga - enye gị isi ụzọ maka ọdịnihu gịụdị ụdị ịzụ ahịa agadi ma ọ bụ ngalaba injinịa.
Acura ụgbọ ala
Kpọtụrụ ebe a: https://www.acura.com/contact-us/
Acura bụ ụdị ụgbọala azụmahịa ụgbọala, ọtụtụ ihe ndị ọzọ maka egwuregwu. Mana ị ga-ezitere ha ngwa ngwa gbasara ọrụ gị. Ị nwere ike izipu ozi email na Acura ma ọ bụ soro ha kwurịta okwu na nkata ndụ.
Ikwesiri ileba anya na ngalaba ha na kọntaktị na weebụsaịtị. Companylọ ọrụ anyị, agbakwunye weebụsaịtị a na listi ụlọ ọrụ Automotive na nwee olile anya na ị ga-enweta ezigbo uru nke ahụ.
Dị ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na obodo Dubai. Ihe ngosi a bu ahia ahia ahia zuru oke. Ọzọkwa, nzukọ a na-akpọ ndị mmadụ gburugburu ụwa. Yabụ na ebe are siri bia, ị ka nwere ike isoro ha rụọ ọrụ. Dị ka anyị niile maara 80% nke ọrụ na-abịa site India na Pakistan. Nke a bụ ihe mere na agbanyeghị nke ma ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ịbanye site na Dubai. Still ka nwere ohere ma biko tinye na websaịtị ha. Nke a ga - enye gi Haygood nka nka na Dubai.
Udi a bu akara eji aputa ihe iche ma otutu ndi oru n’enweghi ike inweta ha oru ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-enwe ahụmịhe dị mma, ị ga-ahọrọ n'ezie will ga-enwe ike inweta ọrụ na ha. Companieslọ ọrụ ndị a na-akpọ ndị isi na-ahụ maka ọrụ na ndị isi ala ọrụ.
Tee a: https://www.bmwgroup.com/en/careers.html
Ka emechara BMW Group. Igosi na ha bu ndi onye mbubata ahia nke Dubai City. Basedlọ ọrụ dị na Sharjah na Northern Emirates. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ AGMC BMW. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ BMW abanyela na afọ 40th nke afọ na 2016. N’egwu, BMW AGMC ruo ugbua. Companylọ ọrụ ahụ na-eweta oke ihe omuma na ihe omumu na Dubai. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-azụ ahịa n'ime iri afọ anọ gara aga.
N'iburu nke a n'uche, BMW na-elekọta azụmahịa maka ihe karịrị 40 afọ. BMW AGMC enyefela aka na ya ebe ndi oru no na UAE bu ndi India. Ọrụ maka ndị na-ere ahịa na BMW na-eme ngwaahịa ha na ọrụ ha kachasị mma na ahịa. N'otu oge ahụ, ndị ahịa nwere mmasị na ụgbọala ndị na-anaghị ahụ maka ya.
Ụgbọ ụgbọala BMW Group bụ ezigbo ụlọ ọrụ. Nzukọ ahụ guzobere otu ndị ahịa na 1976. Na eziokwu, BMW AGMC kemgbe ahụ aghọwo otu n'ime ihe kacha mkpa ndị ahịa na-enye ọrụ ego. Ụlọ ọrụ a kwadoro site na BMW Group na Middle East. N'aka nke ọzọ, na 2016, AGMC ghọtara nke ọma. Ha na-enwetakwa aha dị ka onye na-ere ire ere zuru ụwa ọnụ.
Kpọtụrụ ebe a: http://www.alfaromeo-me.com/contact
Companylọ ọrụ a nwere ọtụtụ alaka na Middle East. Iji maa atụ, inwere ike ịchọta ha na Bahrain, Kuwait, Qatar na Lebanon. Yabụ, Enwere ọtụtụ nhọrọ maka gị dịka onye na-achọ ọrụ iji nweta ụzọ ziri ezi.
Alfa Romeo, ọ bụ ezigbo ika. A na-ererịrị ugbo ala ndị mara mma nke ọma ma na-elekọta ha na ụlọ ọrụ a. Ị nwere ike ịnweta ebe a Dubai Alfa Romeo. Na-atụ anya ụlọ ọrụ a ga-abụ onye ọrụ gị ọzọ.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-enwe ahụmịhe ị ga-enweta ohere iji soro ụlọ ọrụ dị ka nke a rụọ ọrụ. Enwere njikọ nke enyere n’elu ma biko kwuo okwu na ya Ha ga-eburu gị gaa na ngalaba ọrụ. Nwere olile anya na ị ga-enweta ụlọ ọrụ dị ịtụnanya na United States na ụlọ ọrụ a.
Toyota Cars na UAE
Kpọtụrụ ebe a: http://www.toyota.ae/site/enquiry/
Carsgbọ ala Toyota na Dubai bụ nke Al-Futtaim Motors. Ọ bụ ìgwè buru oke na na-enye ọtụtụ ohere ọrụ na Middle East ọrụ ahịa. Yabụ, nzukọ a na-enye ụgbọ ala Toyota dị elu. Gettingbịakwute ndị njikwa mma agaghị abụ nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-enwe ahụmịhe.
Nzukọ a maara nke ọma. Nyocha ịntanetị dị ka naanị ịhụnanya na ụlọ ọrụ a. Ya mere ị ga-enweta ohere na ụdị elu dịka nke a. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ ụgbọala na-enye ndị ọrụ ha ụgwọ ọrụ dị oké ọnụ ahịa. Ị nwere ike na-atụ anya mgbe niile na ị ga-enweta ọzụzụ dị mma na ịhazi ọzụzụ ya.
Kpọtụrụ ebe a: https://cadillac.libertyautos.com/site/contact-us/
Companylọ ọrụ Cadilac ekwesighi ịme ka onye ọ bụla mata. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ọrụ ọhụrụ nke ọrụ onwe gị ka onye njikwa ma ọ bụ onye na-enye ndụmọdụ ahịa. Companylọ ọrụ a nwere ike ịbụ ọrụ gị. Naanị n'ihi na enwere akụkọ dị ogologo n'azụ ụdị nke Cadilac na United States na Europe.
N'oge a ụlọ ọrụ ahụ enweghị ọrụ ọ bụla na-ekwuputa na weebụsaịtị ha. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịnwe nyocha ma nwee mkparịta ụka n'etiti ndị na-ere ahịa. Oge ụfọdụ Ajụjụ dị mfe ngwa ngwa na-eduga maka ọrụ zuru oke.
Kpọtụrụ ebe a: https://uae.sellanycar.com/contact
Sall Any Car na-arụ ọrụ n'ụwa. Ụlọ ọrụ a karịrị nnọọ ọwa ụgbọ ala na-ere ahịa ụgbọala. Ha na-akwụ ụgwọ ọnụ ala maka n'efu. Ndị ahịa nwere ike iji ọnụ ahịa ha tụnyere ma hụ ihe ndị ọzọ na-ekwu. Enweghị ọrụ na ọrụ ma ọ ga-arụ ọrụ mgbe ị na-eji ha ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ọrụ Ọrụ Ntụkwasị Obi
Tee a: https://www.autotrustuae.com/career
Companylọ ọrụ a bụ akụkụ nke AW Rostamani Automotive Group. Kaosinadị, ọ na - enweta ngalaba ọrụ ha na ọrụ ha. Workingrụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ga-eme ka ọrụ gị sie ike na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ahịa Dubai na Abu Dhabi.
Kpọtụrụ ebe a: https://www.copartmea.com/
Ngalaba ya na Middle East nwere ihe karịrị 200 ugbo ala na-ere ihe niile kwa ụbọchị. Na-ekwukarị, ụlọ ọrụ a dị mma Ebe ị ga-achọ ọrụ.
Ụlọ ọrụ Copart bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị nke ndị nwe ụgbọ. Uzo a na-ere kwa ugbo nde 2 kwa afo ebe ha malitere. Ruo ugbu a, ihe karịrị ụlọ ọrụ 170 gafee ụwa na-ebipụta mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Nhazi ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na 2012. Copart gbatịrị ihe onwunwe ya na Middle East. Ụlọ ọrụ a na-atụ anya mmepe na mba Gulf.
Tee a: http://www.alshamaligroup.com/careers.php
Goodlọ ọrụ ọzọ dị mma ịmalite ọrụ ọ ga-abụ Al Shamali Auto Parts Group. Companylọ ọrụ a na-enye ohere ọrụ dị ịtụnanya na Commercial Bank of Dubai, Building, Baniyas Square, Deira, Dubai. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eme njem na UAE. Gha ekwesiri ilere onwe gi anya ma obu jikoo ya na ndi isi ha n ’Intanet.
Companylọ ọrụ a bụ nzukọ lebara anya nke ndị ahịa. Na-aga n'ihu mgbe niile na ụzọ kwesịrị ekwesị na-ele anya maka ndị ọbịa na-anụ ọkụ n'obi, ndị ọrụ ume ike, ndị otu egwuregwu na-agbanwe agbanwe ya na ihunanya nke iziga ndi ahia ha ahia di nma na obodo Dubai. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ a nwere usoro ịnabata ọrụ dị mfe. Ihe ị ga - eme bụ ka ibido malitegharịa ha.
Ha bụ ụlọ ọrụ ọzọ maara nke ọma na United Arab Emirates na-arụ ọrụ. AW Rostamani Group kwesiri ekwesiri iburu n'uche. Companylọ ọrụ abụghị ụlọ ọrụ ahịa ọ bụla mana ha na-emepụta akụkụ akpaaka. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-enwe ahụmịhe injinia na azụmahịa Automotive. Denye na njikọ nke ụlọ ọrụ anyị nyere. Ma hị ga - enweta ọrụ n'ụlọ ọrụ nrọ dika AW Rostamani Group.
Kpọtụrụ ebe a: https://www.rmamotors.com/contact-us/
RMA Motors na-ere ụgbọala klas dị elu. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịzụta ma ree ụgbọ ala n'ahịa UAE. Ọzọkwa, ego ụgbọala na ire ere na-ere ahịa. Yabụ, n'ikwu okwu n'ozuzu, ọ ga-aba uru ịkpọ ha oku. Ha na-ele anya ka ukwuu ndị ọrụ nka na otu ha. Yabụ, ọ bụrụ na ịmara otu esi ejikwa igwe eletriki na ụgbọ ala dị elu ị kwesịrị ị na-atụle ezigbo engineering ọnọdụ ha.
Ugbu a, anyị na-anakọta maka ụgbọala auto na Dubai!
Ọrụ ụgbọala na UAE - Ọrụ na Porsche na Ferrari UAE
UAE maka Ugbo ala na Dubai
Ịchọrọ ịchọta a Job na Dubai? n’agbanyeghi na nke a nwere ike buru eziokwu anyi nwere ike inyere gi aka. Nanị bido oru ohuru na UAE ma ọ bụ Kuwait!. Maka n'aka na ị ga-elekwa ụlọ ọrụ ịgba ụgwọ. Tupu ị gawa, lee anya Dubai no.1 ụlọ ọrụ na ebe a na-arụ ọrụ na UAE. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.